को होला प्रकाश अर्यालपछिको आईजीपी? सर्वेन्द्र कि रमेश - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
को होला प्रकाश अर्यालपछिको आईजीपी? सर्वेन्द्र कि रमेश
माधव धिताल काठमाडौं साउन २
सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल
प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार ३० गते १५ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। डीआईजीका लागि सिफारिसमध्ये सबैभन्दा चर्चामा छन् एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खेरल। पहिलो नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका खरेल डीआईजी बढुवाको सिफारिसमा दोस्रो नम्बरमा परेका छन् भने खनाल उनलाई उछिन्दै पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएका छन्।
यो खबरसँगै यी दुई ‘स्टार’ अधिकृतमध्ये आइजीपीको फूली कसले लगाउला भन्ने अनुमान र मत प्रहरी सेवावृत्तभित्र मन्थन हुन थालेको छ। तल्लोदेखि उपल्लो तह सम्मका प्रहरी जमघटहरुमा दुबैका सवल र दुर्वल पक्षका अनेकन किस्साहरु विनिमय हुन थालेका छन्।
खनाल र खरेलका माताहतमा रहेर काम गरेका प्रहरीहरुले यी हाकिमहरुको व्यवहारलाई तौलँदै छन् भने दुबैका हाकिम भएका प्रहरी अधिकृतहरु यिनीहरुका दृष्टि, कामको शैली र राजनीतिक सम्बन्धबारे चर्चा गर्दैछन्। ‘तरिका पुर्याएर काम गर्ने र अरुलाई रिझाउने दुबै मामिलामा खनाल अगाडि देखिएजस्तो छ’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘तर खरेल अलिक हकि र निडर अफिसर हुन्। उनी पनि काममा कम छैनन्। तर, अरुलाई रिझाउन भने खरेलले सक्दैनन्।
हुन पनि, नेपाल प्रहरीको ऐन÷नियमावली परिवर्तन नभए चैत २८ मा अहिलेका आईजीपी प्रकाश अर्यालले ३० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। अर्यालसँगै उनका ब्याजी ११ जना जो एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन्, बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्दहरुले पनि अवकाश पाउनेछन्। अर्यालका ब्याजी सबैले अबकाश पाएपछि त्यसबेला पनि डिआईजीबाट एकैपटक आईजीपी बन्नेछन् अहिले बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका एसएसपीहरु मध्येबाट। यस्तो अवस्थामा डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका १५ जना एसएसपीहरुबाटै आईजीपी बन्ने निश्चित छ। त्यसैले पनि खरेल र खनाललाई प्रकाश अर्यालपछिको भावी आईजीपीको रुपमा हेरिएको हो।
प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट सरुवा भएर प्रहरीको आईजीपी सचिवालयमा सरुवा भएका खनाल पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएपछि एसएसपी खरेलमाथि अन्याय भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। अर्कोथरीले भने, खनालले पछिल्ला बर्षहरुमा प्रहरी सेवाको नाक राख्ने गरी काम गरिरहेको भन्दै उनी काविल र दक्ष रहेको तर्क गरिरहेका छन्। बरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेकामध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्ने हो भने डीआईजी भएर काम गरेको कार्यमुल्यांकन पनि जोडिने छ। तर, खरेललाई दोस्रो नम्बरमा राखेर बढुवा सिफारिस गरिनुलाई कतिपयले आईजीपी बन्नबाट रोक्न अहिलेदेखि नै खेल सुरु भइसकेको बताइरहेका छन्।
खनाल अहिले आईजीपीको सचिवालयमा कार्यरत छन् भने खरेल प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएर राष्ट्रसंघीय मिसनमा छन्। एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका खनालले कुल १०० पूर्णांकमा ८४ दशमलव ४७३४ अंकका साथ पहिलो नम्बरमा छन् भने दोस्रो नम्बरमा परेका खरेलले ८३ दशमलव ८५१० अंक पाएका छन्।
एसएसपी हुँदा पहिलो नम्बरमा परेका रमेश खरेल बेला बेलामा निकै चर्चा र विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन्। गत २०७० जेठ १० गते भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखका रुपमा खरेलले प्रहरी संगठनभित्रको तितो यथार्थ पोखेपछि विवादमा मात्रै तानिएनन्, संगठनभित्र कारबाही नै भोग्नु परेको थियो।
खरेलले त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई सम्बोधन गर्दै डिआईजीहरु एआईजी बन्न व्रिफकेश बोकेर दौडिरहेकाले त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई बढुवा नगर्न सुझाव दिएका थिए। भनेका थिए–
‘एउटा कुरा मैले भन्दा यसले तरंग लिनसक्छ। तर, म भन्छु–नेपाल प्रहरीहरुको प्रोमोशनको बेला आएको छ। ७ महिनापछि बल्ल गाँठो फुक्यो। माननीय मन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचारीलाई प्रोमोशन नदिनुस्। मलाई आशा छ। यति भनेपछि उहाँलाई पुग्छ होला। यति भनेपछि पुग्छ। अहिले डिआईजीहरु बढुवाका लागि सुटकेसहरु बोकेर पावर सेन्टरमा जाने, चाकडी गर्ने, मलाई प्रोमोशन गर्दे अथवा ठेकेदारहरुले पैसा उठाएर फलानोलाई प्रोमोशन गरिदिनुस् भनेर दौडधूप चलेको छ। हजुर कहाँ पनि खुब आयो होला। जो हजुर कहाँ भिजिट गर्छ, ति ‘अपरचुनिष्टहरु’ हुन्। पावर सेन्टरमा जाने प्रहरी कर्मचारी ‘अपरचुनिष्ट’ हुन्। यसले तपाईँलाई मात्रै होइन, हाम्रो नेपाल आमालाई खोक्रो बनाउँछ। कृपया यसमा ध्यान दिनुहोला। नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टाचारलाई प्रोमोशन नदिएर इमान्दारलाई प्रोमोशन गरेर उदाहरण सेट गरिदिन अनुरोध गर्दछु।’
जुन कार्यक्रममा खरेल सहभागी थिए, त्यही कार्यक्रममा त्यसबेलाका डीआईजी विज्ञानराज शर्मा पनि सहभागी थिए। विज्ञान त्यसबेला आफै एआईजी बन्ने दौडमा थिए। एसएसपी खरेलको यो अभिव्यक्ति पछि प्रहरी संगठनमा उनको आलोचना सुरु भयो। त्यसबेलाका डीआईजीहरुले प्रहरी महानिरीक्षकलाई खरेलमाथि कारबाही गर्न दबाब दिए। त्यसपछि त्यो कुरा गृहमन्त्रालय र त्यसबेलाका गृहमन्त्री बामदेव गौतमसम्म पुग्यो।
गृह मन्त्रालयले एसएसपी खरेलले गरेको त्यो भाषणको भिडियो मगायो र डीआइजी विज्ञानराज शर्माकै नेतृत्वमा छानविन समिति बनायो। छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी संगठनमाथि आँच पुग्ने र प्रहरी संगठनको मर्यादालाई स्खलित बनाउने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई कारबाही गरियो। त्योसँगै खरेललाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी तालिम केन्द्र चितवन सरुवा गरिएको थियो।
त्यसबेला अहिले डिआईजीका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका खनाल आईजीपी भए उनले करिब दुई वर्ष प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्ने छन्। खरेलभन्दा पहिले खनाल आईजीपी बने खरेलको आईजीपी हुने सपना सपनामै सीमित रहनेछ। तर, खरेल पहिले आईजीपी बने पनि उनीपछि आईजीपी बन्ने बाटो खनालका लागि भने खुल्लै रहनेछ।
खरेल प्रहरीभित्र खरो र निडर छबिका अधिकृत मानिन्छन्। २०४५ सालमा प्रहरी जवानका रुपमा जागिर सुरु गरेका खरेल नेपालको राष्ट्रिय भलिबल टिमका पूर्वकप्तान पनि हुन्।
.खरेललाई उछिन्दै पहिलो नम्बरमा डिआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका सर्वेन्द्र खरेल जत्तिकै चर्चामा आएका प्रहरी अधिकृत हुन्। २०४६ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट जागिर सुरु गरेका सर्वेन्द्र तराईमा रहँदा भूमिगत भएर अपराधिक क्रियाकपाल चलाउँदै आएका आपराधिक समूहका नाइकेहरुलाई इन्काउन्टर गरेर चर्चामा आएका थिए। त्यतिमात्रै होइन काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको भूमिकामा हुँदा काठमाडौंको बेबिलोन डान्सबारको घटनापछि उनको चर्चा चुलिएको थियो।
उनले काठमाडौंको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दोस्रो निशानामा पारेका थिए, गुण्डा नाइके कुमार घैँटेलाई। फिल्मी शैलीमा घैटेलाई इन्काउन्टर गरेपछि राजधानीका गुण्डाराजको केही हदसम्म अन्त्य भएको थियो। अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर आएका खनालले नेपाली फुटबल खेलमा भएको ‘म्याच फिक्सिङ’ को घटना बाहिर ल्याएर चर्चामा आएका थिए।
बंगलादेश र अफगानिस्तानविरुद्धको खेलमा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा नेपाली फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापासहित विकाससिंह क्षेत्री, रितेश थापा, सन्दिप राई र अञ्जन केसीलाई एसएसपी खनालले पक्राउ गरेका थिए। म्याच फिक्सिङको घटना बाहिर आएपछि एसएसपी खनालको चर्चा ह्वात्तै बढेको थियो।
अर्यालले चैत २८ पछि अबकाश लिएपछि डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका खरेल खनाललाई उछिन्दै पहिले आईजीपी भए करिब १० महिना प्रहरी संगठन हाक्नेछन्।
तर, पहिलो नम्बरमा डिआईजी भएका खनाललाई पछि पार्न त्यति सजिलो भने छैन। ८ महिनापछि सिफारिसमा परेका डीआईजीहरुबाटै आईजीपी बन्न बाटो खुल्ला हुनेछ। त्यसबेला अहिले डिआईजीका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका खनाल आईजीपी भए उनले करिब दुई वर्ष प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्ने छन्। खरेलभन्दा पहिले खनाल आईजीपी बने खरेलको आईजीपी हुने सपना सपनामै सीमित रहनेछ। तर, खरेल पहिले आईजीपी बने पनि उनीपछि आईजीपी बन्ने बाटो खनालका लागि भने खुल्लै रहनेछ।
सामान्यतया प्रहरी प्रमुखको पदमा सधैं पहिलो नम्बरकै बरिष्ठ अधिकृतको दाबी रहनु स्वभाविक हो। यद्यपी हाम्रोमा दोस्रो या तेस्रो नम्बरका अधिकृतले आइजीपीको फूली लगाएका उदाहरणहरु छन्। सरकार, गृहमन्त्री र राजनीतिक सम्बन्धको प्रभाव पनि आइजीपी नियुक्तमा रहँदै आएको छ। त्यसैले प्रहरी प्रमुखको पदमा खनाल र खरेलमध्ये कसले बाजी मार्छ भन्ने अहिल्यै केही भन्न सकिन्न।
प्रकाशित २ साउन २०७४, सोमबार | 2017-07-17 19:20:51